Ahoana no ho lasa avo-Flying Travel Influencer | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Ahoana no ho lasa avo-Flying Travel Influencer
Izany no nofy - mandeha fialan-tsasatra sy hatao vola ho azy. Tsy vitan'ny hoe, fa hanana ny sidina, zavatra ilaina, sy ny sakafo ho anareo nandoa koa.
Impossible, marina? Tsy misy fomba na iza na iza eo amin'izao tontolo izao dia mandoa ny back-Scratching tsy misy toa anao mba hiaina ny fiaramanidina fametrahana bitan'ny ny A-lisitra izao tontolo izao-trotting superstar.
Raha tsy ... Misy!
Marina izany, azo atao ho anareo ny hainao izao tontolo izao eo amin'ny olona iray hafa ny Dime - fa ianao dia tsy maintsy mampiasa ny aterineto amin'ny acuity ny Rain Man ny misintona azy eny.
Ny tsara indrindra Travel mpamaham-bolongana no nandehanany nandoa ho azy ireo noho ny fifangaroan'ny talenta, vintana, sy ny fahaiza-manao - eto no fomba ahafahanao manao toy izany koa.
Fantaro ny fomba manoratra
Na ianao ny Travel vlogger, mpitoraka blaogy, na Twitter, na inona na inona mikapoka mahomby kosa ny teny. Izany no antony maha-zava-dehibe ny hananan'ny mpisarika amin'ny dia lavitra ny fahaizana tsy azo ihodivirana, soratra.
Makà manindrona tsy tapaka amin'ny manoratra tsara dika mitovy amin'ny alalan'ny fanaovana adiny iray isan'andro mba scribble ny hevitrao. Ataovy ny diary, manoratra bilaogy manokana, mametraka ao amin'ny Twitter prolifically - miaraka amin'ireo fahaiza-manao eo amin'ny paosy indray, ianao ho afaka ny haneho ny tenanao fomba mahomby kokoa sy hahatanteraka ny fomba fitenenana izay mety hahazo anao manaraka malaza amin'ny aterineto.
Get ny tosika eo amin'ny mpanara-dia
Iza moa no handeha hatoky bebe kokoa ao amin'ny haino aman-jery ara-tsosialy - ny Instagram mpampiasa izay mpanara-dia ihany ny Neny sy Bot avy any Rosia, na olona miaraka amin'ny mpanaraka mihoatra noho Kim Kardashian?
Ny mazava ny valiny, ary izany no mahatonga anao handany vola tokony vola amin'ny mpanara-dia rehefa manomboka ny dianareo mba ho lasa influencer.
Mividy mpanara-dia avy amin'ny toerana toy ny Greedier Social Media no tsara indrindra mba hampitombo ny fomba fototra ny tsi-fananako tsiny dia afaka manorina eo amin'ny ho avy.
Mifandray amin'ny olona tsara
Ny Travel orinasa dia fifaninanana bilaogy, eny, mihoatra noho ny olona no manome izany ho handeha isan-taona. Raha vao manana fototra mafy orina ny mpanara-dia sy ny votoatin'ny, ny hany fomba hatao nahatsikaritra ny tenanao dia ny hahazo nifandray Travel amin'ny mpanome tolotra izay afaka manohana ara-bola anao mandeha fialan-tsasatra.
Mba hahatonga ny fifanarahana mahasoa, ianao tsy maintsy ho mazava tsara fa ny fanohanana ara-bola ianao, dia hanome ireo olona sarobidy ny hatsiaka sy ny manan-danja ho eo amin'ny isan'ny mponina. Izany dia quid mpomba quo fandaharana, fa izay hamela anao hahita izao tontolo izao.
Hahatakatra ny mpihaino
Ny vaovao dia tsy hifikitra mpanohana manodidina ho ela raha toa ka tsy mihevitra afaka manao amin'ny mpihaino - ary izany no antony tokony ho fantatrao tsara ange fa ny isan'ny mponina dia.
Midika izany fa takatry ny saina ny mpihaino anao ny sokajin-taona eo ho eo, ny tiany, sy tsy tiany, inona no mitsidika tsy tapaka ireo toerana, ary inona no ataony rehefa ry zareo lavitra ny Internet. Noho izany fanazavana-baiboly anananao, ianao ho afaka mamorona afa-po fa ny mpanara-dia tia - ka mitandrina ny mpanohana eo amin'ny lafiny.
Ireo no toro-hevitra ny! Afaka mieritreritra ny fomba hafa ho lasa avo-manidina Travel influencer? Dia aoka hahalala ao amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany!
Lyon Airport mankany Geneva Trains
Tsara eo anatrehanao tonga influencer, mila mampiofana fitsangatsanganana mankany amin'ny toerana hafakely ianao, ary manomboka maka sary mahatalanjona ao anaty atmosfera tsara, ianao mamaky? Use Save A Train mora indrindra mba hahazoana ny fiaran-dalamby tapakila, dia toy izany no tsy lafo be ho anareo ny asa eo amin'ny fiainanao!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Eo an-toerana tsara indrindra Drinks to Try any Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-become-a-high-flying-travel-influencer%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny tr ho ru na izany sy ny maro hafa fiteny.
#highflyer #influencer #dia lavitra #travelinfluencer